Nihoatra ny 400 miliara yuan ny sandan'ny sandan'ny fifanakalozana any ivelany | Kanglida
Nihoatra ny 400 miliara dolara ny vola sandan'ny fifanakalozana avy any ivelany
Famakafakana ny anton'ny fitomboan'ny varotra vahiny
Hebei: manafatra sy manondrana 364.23 miliara yuan nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny Novambra
Araka ny antontan'isa mahazatra, tamin'ny taona 2019, nahatratra 400,16 miliara yuan ny totalin'ny fanafarana ara-barotra sy ny fanondranana hebreo Hebei, fitomboana 12,6% nandritra ny vanim-potoana tamin'ny taon-dasa (mitovy ny any ambany), ary ny taham-pivoarana dia 9,2 isan-jato avo lenta noho ny an'ny firenena manontolo. Anisany, ny fanondranana dia nahatratra 237.03 miliara yuan, fitomboana 5,7%, 0.7 isa isan-jato avo lenta noho ny an'ny firenena manontolo; Nahatratra 163.13 miliara yuan, ny 24,4%, ny 22 isan-jaton'ny isan-jato mihoatra ny an'ny firenena manontolo.
Wang Xigang dia nilaza fa tamin'ny herintaona, ny fifanakalozana ara-barotra ankapobeny ao amin'ny faritanin'i Hebei dia nitana ny laharana voalohany, ny fividianana tsena ary ny e-commerce cross-border. Nahatratra 347.12 miliara yuan ny fanafarana ny varotra sy ny fanondranana ankapobeny, fitomboana 10,3%, kaonty 86,7% ny fitambaran'ny fanafarana sy ny fanondranana; Nahatratra 26.96 miliara yuan ny fanodinana ny varotra sy ny fanondranana, mitombo 4,8%. Ankoatr'izay, ny fanondranana mpanamory ny varotra amin'ny fividianana entana amin'ny tsenan'i Baigou dia 7,3 miliara yuan, fitomboana in-1.1; ny fanafarana sy fanondranana ny e-commerce cross-border dia 360 tapitrisa yuan, fitomboana 176,5.
Tamin'ny taona lasa, nahatratra 60% ny orinasa tsy miankina, ary mihazona fitomboana haingana ny orinasam-panjakana. Nahatratra 253.84 miliara yuan ny fanafarana sy fanondranana orinasa tsy miankina, fitomboana ny 14,2%, mitentina 63,4% ny sandan'ny fanafarana entana sy ny fanondranana any amin'ny faritany. Nahatratra 86,99 miliara yuan ny fanafarana sy fanondranana orinasam-panjakana, fitomboana 28,2%. Nahatratra ny 59,18 miliara yuan, nidina 9,3% ny fanafarana sy fanondranana orinasam-bola avy any ivelany.
Ny fanafarana sy ny fanondranana fehikibo iray, lalana iray mankany an-dàlana dia mihazona fitomboana haingana ary nitohy ny fandrosoana ny fizotry ny tsena. Ny fanafarana sy fanondranana any Aostralia, Brezila ary ireo firenena hafa dia nitombo isa roa, ary ny fanafarana sy fanondranana tany Aostralia dia nahatratra 65.3 miliara yuan, fitomboana 60.9%. Nahatratra 49,14 miliara yuan, nidina 1,5% ny fanafarana sy fanondranana entana any amin’ny Vondrona eoropeanina (28 firenena). Nahatratra 42,52 miliara ny fanondrana sy fanondranana any ASEAN, fitomboana 29,8%. Nahatratra 35,14 miliara yuan ny fanafarana sy ny fanondranana tany Etazonia, nidina 16,8%. Nahatratra 28,91 miliara yuan ny fanafarana sy ny fanondranana tany Brezila, ny fitomboana 26,6%. Nahatratra 22.76 miliara yuan ny fanafarana sy ny fanondranana any Rosia, fitomboana 2,7%. Nahatratra 21,6 miliara yuan, nidina 10% ny fanafarana sy ny fanondranana tany Korea Atsimo. Nahatratra 15,54 miliara yuan, nidina 17,6% ny fanafarana sy fanondranana tany Japon. Nahatratra 12,99 miliara yuan ny fanafarana sy ny fanondranana tany India, fitomboana 7,4%. Ho fanampin'izay, fehikibo iray, lalana iray, dia nahatratra 127 miliara 720 tapitrisa yuan amin'ny fanondranana sy fanondranana, fitomboana 18,1%.
Ny fanondranana vokatra mekanika sy elektrika, vokatra vita amin'ny asa, vokatra avo lenta ary vokatra hafa dia nitombo hatrany. Nahatratra 79.9 miliara yuan ny fanondranana vokatra mekanika sy elektrika, fitomboana 12,3%. Nahatratra 57.53 miliara yuan ny fanondranana entana vokatra, ahazoana 7,7%. Nahatratra 21.01 miliara yuan, fitomboana 11% ny fanondranana vokatra vaovao sy haitao avo lenta (miampita miaraka amin'ny vokatra mekanika sy elektrika).
Nitombo haingana ny fanafarana entam-barotra toy ny akora vy, raha nihena kosa ny fanafarana ny soja. Nahatratra 110.249 tapitrisa taonina ny fanafarana akora vaika, fitomboana 16,4%. 8.218 tapitrisa taonina ny arina sy lignite nafarana, fitomboana 64,5%. Ny fanondrana solika maivana dia nitombo avo 1.1 heny tamin'ny 4.043 tapitrisa taonina. Nahatratra 4,763 tapitrisa taonina ny import avy any atsimo, nidina 1,7%, ary nitohy ny fihodinanan'ny taona, 88 isan-jaton'ny salanisa ambany noho ny tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Novambra.
Raha resaka faritra manokana, ny fanafarana sy fanondranana orinasa misoratra anarana ao amin'ny Shijiazhuang Comprehensive bonded Zone, Qinhuangdao export processing zone, Caofeidian zotra mifatotra be sy foibem-piraisan-tanana mifatotra jingtanggang (karazana b) dia mivoatra haingana. Ny totalin'ny fanondranana entana sy fanondranana orinasa voarakitra ao amin'ny faritra fanaraha-maso manokana momba ny fomba amam-panao dia 15,84 miliara yuan, fitomboana in-2.2, mitombo 4% amin'ny fitambaran'ny vidin'ny fanondranana sy fanondranana any Hebei, 2.6 isan-jaton'ny salanisa mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Anisany, ny fanafarana sy fanondranana orinasa misoratra anarana ao amin'ny faritra mifamatotra Shijiazhuang feno 762 miliara yuan, fitomboana in-2; ny fanafarana sy fanondranana orinasa misoratra anarana ao amin'ny faritra fizarana fanondranana any Qinhuangdao dia 3.99 miliara yuan, fitomboana 92%; ny fanafarana sy fanondranana orinasa misoratra anarana ao amin'ny faritra fatorana feno Caofeidian dia 2,95 miliara yuan, fitomboana 12,7 heny. Ankoatr'izay, ny fanafarana sy fanondranana orinasa misoratra anarana ivontoerana logiciel jingtanggang (karazana b) dia mitentina 9,05000 yuan, fitomboana 10,3 heny.
Shijiazhuang, Tangshan ary Baoding dia anisan'ireo tanàna telo telo avo miaraka amin'ny fitomboana avo roa heny. Nahatratra 117.88 miliara yuan ny fanafarana sy fanondranana an'i Shijiazhuang, fitomboana 28,4%. Nahatratra 73,38 miliara ny fanafarana sy fanondranana tany Tangshan, fitomboana 22,1%. Nahatratra 37,6 miliara ny fanafarana sy fanondranana Baoding, nitombo 13,6%. Nahatratra 37,11 miliara yuan ny fanafarana sy fanondranana any Cangzhou, fitomboana 17,6%. Shijiazhuang, Tangshan, Baoding, Cangzhou ary Handan samy nahatratra nitombo avo roa heny.